"Cristiano Ronaldo Wuu Ku Fashilmay Juventus Hal Wado Ayuuna Isku Badbaadin Karaa | Laacibnet.net
HomeSerie A“Cristiano Ronaldo Wuu Ku Fashilmay Juventus Hal Wado Ayuuna Isku Badbaadin Karaa
“Cristiano Ronaldo Wuu Ku Fashilmay Juventus Hal Wado Ayuuna Isku Badbaadin Karaa
Juventus waa ay ku qaldaneyd inay la soo saxiixato Cristiano Ronaldo, waqtihiisii Turin waxa uu noqon doonaa mid fashilmay ilaa iyo inuu ku guuleystay Champions League, waxaa sidaasi yiri Antonio Cassano.
Xiddigii hore ee Real Madrid iyo Manchester United ayaa ku biiray Marwada Duqda ah xagaagii 2018, inkastoo uu ka caawiyay Juventus inay sii wadato awoodii ay Serie A ku heysatay hadana waxay ku guuldareysteen inay saameyn ku yeeshaan Yurub.
Juventus waxaa si lama filaan ah Champions League uga reebtay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay kooxda Lyon, waxaana xilli ciyaareedkaan lugtii hore ee wareega 16ka soo garaacday FC Porto.
Kooxda Andrea Pirlo waxay haatan sideed dhibcood ka danbeyaan kooxda hogaanka Serie A heysa ee Inter, iyadoo Cassano uu aaminsan yahay in Ronaldo uusan ku habooneyn qaab ciyaareedka uu Pirlo doonayo inuu ka hirgeliyo Juventus.
“Sannad kale ayaa uga haray qandaraaskiisa, Juventus waxay u la soo wareegtay inay Champions League ku guuleystaan, laakiin waxaa soo martay natiijooyinkii ugu xumaa tan iyo markii uu yimid” ayuu yiri Cassano.
“Isaga la’aantiis xitaa waa ay ku guuleysan lahaayeen koobabka horyaalka Serie A. Qalad ayay aheyd inay la soo saxiixdaan.
“Muddo 120 sannadood ah, guusha ayaa aheyd waxa kaliya ee ay Juventus muhiimada siineysay. Weli waa sidaas laakiin waxay isku dayeen inay maqaarkooda bedelaan markii ay keeneen Sarri iyo Andrea Pirlo.
“Ronaldo wax shaqo ah kuma lahan fekradaha Pirlo. Goolal uu sii dhalin doonaa sababtoo ah fadhi ayuu xitaa ku dhalin karaa. Wuxuu ka soo xaroodaa garabka bidix isagoo burburinaya goolka, kubadihiisa madaxana wax la mid ah ma jiraan.
“Andrea Pirlo wuxuu rabaa inuu ciyaarta gadaal ka soo dhiso, wuxuu rabaa inay ciyaartoyda raacashada badiyaan. Ronaldo natiijo wuu keeni karaa laakiin ciyaarta inteeda badan kama qeyb qaato.
“Waxaan qabaa in Ronaldo uu ku fashilmay Juventus ilaa iyo inay ku guuleystaan Champions League mooyee.”
RASMI: Isku-Aadka Semi-finalka Europa League Oo La Xaqiiyey & Haddii Ay Isku Dhaceen Man United & Arsenal